निर्मला हत्या प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट : एआइजी धिरुको प्रतिवेदन गलत रहेको तथ्य बाहिरियो !
निर्मला हत्या प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट : एआइजी धिरुको प्रतिवेदन गलत रहेको तथ्य बाहिरियो !
काठमाडौं - कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रहरीबाट भएका कमजोरीबारे अध्ययन गरेको एआइजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन तथ्यहीन रहेको पुष्टि भएको छ।
एआइजी धिरु बस्न्यातको समितिले निर्मलाको बलात्कार र हत्यापछिको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले चरम लापरबाही गरेको भन्दै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उनकै प्रतिवेदनका आधारमा सई हरसिंह धामी र जवान चाँदनी साउद निलम्बनमा परेका थिए।
पुनरावलोकन समितिले बस्न्यातको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नेलगायतका तीनबुँदे निर्देशन दिएको छ। योसँगै सोही प्रतिवेदनका आधारमा कार्वाहीमा परेका प्रहरीबारे के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ।
त्यसपछि आइजीको सचिवालले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख तारणीप्रसाद लम्साललाई धिरुको प्रतिवेदनको वास्तविकताबारे यथार्थ बुझेर प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो। लम्सालले पठाएको प्रतिवेदनले एआइजी बस्न्यात समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरु काटेको थियो।
यो पुनरावलोकन समितिले बस्न्यात र लम्सालको प्रतिवेदन अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा बस्न्यातको प्रतिवेदन गलत रहेको राय आइजी सचिवालयलाई माघ २२ गते पेस गरेको स्रोतले जानकारी दियो। उक्त राय आएपछि आइजी सचिवालयले यसअघिको एआइजी बस्न्यातको प्रतिवेदनको औचित्य नरहेको भन्दै कार्यान्वन नगर्न भन्दै आइतबार पत्र लेखेको हो।